जिङब्रेड नयाँ वर्ष - एक मनपर्ने छुट्टीमा घरको सुन्दर र स्वादिष्ट सजावट। यो ब्याच विश्वव्यापी छ, किनभने उत्पादनहरू तालिकामा मात्र राख्न सकिँदैन। घर बनाएको नयाँ वर्ष जिङ्गबर््रेड क्रिसमस-रूखका खिलौनेको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, आवश्यक इच्छाका साथ पेपरका टुक्राहरू बाँधेर। यो परम्परागत पेस्ट्री प्रायः आफन्त र साथीहरुलाई दिइन्छ। यहाँ केहि स्वादिष्ट विकल्पहरू छन्।
चकलेट केकका लागि पकाउनुहोस्
सुँगुर मक्खन को आधा एक प्याक एक सय ग्राम को साथ चीनी संग। यो वेलिनको प्याकेज थप्न सिफारिश गरिएको छ। यस चरणमा मुख्य कुराले मिक्सरसँग पाँच मिनेटको लागि सामग्रीसँग सावधानीपूर्वक मिश्रण गर्न मिल्छ। यदि चीनी पूर्ण भंग गर्दैन भने, नयाँ वर्षको गाजर सजिलै हुनेछैन, र यसको सतह पनि हुनेछ। त्यसपछि, बिस्तारै तीनवटा चम्मच कोकोआ, सानो दालचीनी, नारंगी पिक्सेल, बीस ग्राम ग्रामीण पनीर अदरक र एक ठूलो अन्डा थप्दै बिस्कुट जारी राख्नुहोस्। सबै अवयवहरू पूर्णतया भंग गर्नुपर्छ, र जनसमा पूर्णतया समानुभूति हुन्छ।
एक अलग कटोरी मा, 260 ग्राम आटा र सोडा चम्मच सोडा को हल। अब बिस्तारै मिश्रणले आटामा थप्न सुरु गर्नुहोस्। जब यो घने हुन्छ, यो तपाईंको हातले यसलाई मिश्रण गर्न सिफारिस गरिन्छ। आटाको समान वितरणबाट निर्भर हुन्छ घरमा नयाँ वर्ष जिङ्गब्रेडको कति पकाएको स्वच्छ हुनेछ।
आटा, जुन प्लास्टिकिन जस्तै देखिन्छ, फ्रिजमा आधा घण्टाको लागि राखिएको छ वा सम्पूर्ण रातको लागि राम्रो छ। तेल स्थिर गर्न राम्रो तरिकाले राम्रो गर्न आवश्यक छ। यस अवस्थामा यो एक अर्ध-समाप्त उत्पादनको साथ काम गर्न धेरै सजिलो हुनेछ। अब तपाईं अर्को चरण अगाडी बढ्न सक्नुहुन्छ।
चकलेट जिङ्गब्रेडको लागि परीक्षणको साथ काम गर्ने नियमहरू
तपाईंले पाक सुरु गर्नु अघि, परीक्षण परीक्षण गर्न सिफारिस गरिन्छ। यसले तपाईंलाई देख्न सक्नेछ, पहिलो, भोल्युममा कति बढाउँछ, र दोस्रोमा, चाहे बेकिंग फारमहरू। यदि भविष्य जिंजरब्रेड नयाँ वर्ष तुरुन्त पिघ्न, चिकन बन्नुहोस् र बेकिंग ट्रेमा हस्तान्तरण गर्दा त्यहाँ समस्या हुनेछ, त्यसपछि तपाईलाई फटा थप्न आवश्यक छ। यसलाई राम्रो वितरण गर्न निश्चित हुनुहोस्, राम्ररी पुन: घुमाउनुहोस् र यसलाई ठुलो पार्नुहोस्।
यदि सबै कुरा क्रममा छ भने, कामको प्रक्रियामा आटालाई चार भागमा विभाजित गर्न सिफारिस गरिन्छ। हामी तिनीहरूमध्ये एक छोड्छौँ, हामी बाकी हटाउनुहोस् फ्रिजमा। आटा पर्चीमा लुकाइएको हुनुपर्छ। तपाईं एक रोलिंग पिन रमाईलो गर्न सक्नुहुन्न वा यसलाई अर्ध-समाप्त उत्पादनसँग छिडाउनुहोस्।
अर्को, हामी तपाईंको मनपर्ने उत्पादनहरू ढाल्न सुरु गर्छौँ। यस्तो परीक्षणबाट कस्तो तयार हुन सक्छ? हामी दुई मूल संस्करणहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
जिन्जरब्रेड "मेरो परिवार" र "स्मिमेन"
यो मूल बेकिंग क्रिसमस रूख लाई सजाय गर्न सक्छ। हामी घरको अवस्थामा नयाँ वर्ष जिङ्गब्रेडको लागि निम्नलिखित नुस्खा प्रस्ताव गर्दछौं।
उत्पादनहरू पतली र खतरनाक हुनुपर्दछ। यसैले, आटा3मिमी भन्दा बढी को मोटाई सम्म घुमाईयो, किनकी यो तयारी को समयमा यो वृद्धि हुनेछ। Figurines प्रयोग गरेर figurines बनाउन र 6-10 मिनेट को लागि ओवनमा राख्नुहोस्। तापमान 175 डिग्री भन्दा बढी हुनु हुँदैन। तर यो एक परीक्षण जिङ्गब्रेड बनाउन सिफारिस गरिन्छ, त्यसैले सम्पूर्ण आटा खराब गर्न को लागी।
पकाएको उत्पादन धेरै सुन्दर छन्। केवल यस अवस्थामा हामी तिनीहरूलाई ट्रेबाट हटाउँछौं। अन्यथा तिनीहरू टुक्रा हुनेछन्। अब हामी चमकदार संग क्रिसमस जिंगब्रेड को सजाछन।
तपाईं रूखमा वस्तुहरू ह्याङ्ग गर्न सक्नुहुन्छ।
हनी केकका लागि पकाउनुहोस्
एक सस्यानमा, एक तेस्रो कप तरल शहद, सानो चम्मचको दालचीनी, स्टार्च, सिरका, ग्राउन्ड अदरक र सानो नमक राख्नुहोस्। पानी स्नानमा जन राख्नुहोस् र, लगातार मिश्रण, एक सजावटी मिश्रण मा फर्कनुहोस्। नयाँ वर्ष जिङ्गब्रेडको लागि यो नुस्खा ग्राउण्ड लौंगको चुरोट संग पूरै सकिन्छ। एक धेरै सुगंध पेस्ट्री पाउनुहोस्।
मिश्रणमा अहिले नरम मक्खनको दुई-तेस्रो भाग राख्छ र पूर्णतया शान्त गर्न छोड्नुहोस्। यस समयमा, एक गिलासको चीनीबाट दुईवटा अण्डा। हामी सबैसँग एकसाथ मिलाउँछौं र बिस्तारै अँगालो थप्न सुरु गर्छौं। यसले तीन चश्मा मात्र लिन्छ। निस्सन्देह, सबको आटाको गुणमा निर्भर हुन्छ। रेफ्रिजरेटरमा एक दिनको लागि राम्रो तरिकाले घनिएको आटा मिलाउनुहोस्। अब तपाईं मोल्डिंग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
जिन्जरब्रेड नयाँ वर्षको "हेरेरबोन" ले महो आटाबाट बनाएको थियो
त्यस्ता उत्पादनहरू मुख्य तालिकाको लागि उत्कृष्ट सजावट हुनेछ, वा तिनीहरू त्यस्ता उत्सव केकहरूसँग ताज लगाउन सकिन्छ। तर यो केवल मौलिक होइन, तर यो धेरै नयाँ वर्ष जिङ्गब्रेड पनि स्वादिष्ट छैन। आफ्नै हातमा तपाईं एक क्रिसमसको रूख खिलौने र तालाब देखि मोती तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
आटा निकै पनी रोल बाहिर। अर्को, चाकूको प्रयोग गरेर हामी बिभिन्न आकारका ताराहरू भन्दा ठूलो देखि कटौती गर्दछौँ। हामी figurines बेकिंग पाना मा वितरित गर्दछ र सात मिनेट भन्दा बढी को लागि खाना पकाउनुहोस्। तापमानको लगभग 190 डिग्री हुनुपर्छ।
तयार भएका जिङ्गब्रेडहरू आफ्नै हातले राम्ररी ठुलो हुनुपर्छ। यस समयमा, हरित शीशालाई तयार पार्नुहोस्। हामी क्रिसमस रूखहरू बनाउँछौँ, प्रत्येक परत स्नेहन र ठूला ठूला ठूला ठूला देखि। उत्पादनहरु लाई तीन देखि चार घण्टा सम्म छोड्नुहोस्। अब तपाई तिनीहरूलाई उत्सव तालिकामा राख्न सक्नुहुन्छ वा केक सजाउन सक्नुहुन्छ।
अन्न जिन्जरब्रेडको लागि अन्डा बिना नुस्खा
प्रस्तावित विकल्प उत्कृष्ट अर्द्ध तयार उत्पादन हो जुन पशु मूल उत्पादन को उपभोग छैन। यस तथ्यको बावजुद यो नुस्खामा कुनै अण्डा छैन, अन्तिम उत्पादनले यसको स्वादको गुणहरू गुमाउँदैन।
150 ग्राम को कम-मोटो खट्टा क्रीमले 300 ग्रामको साथ धेरै ध्यानपूर्वक रमाइलो गर्छ। मिश्रणमा एक नरम तेल थप्नुहोस्। यसले प्याकेजको तेस्रो स्थान लिनेछ। 190 ग्राम तरल शहद, सानो नमक र लौरी, सोडा र चट्टानको चम्मचको एक चम्मच थप्नुहोस्। सबै मिश्रित र धीरे-धीरे आधे किलो किलोग्राम सिफित आटा राख्नुहोस्।
आटा राम्रोसँग घुमाउनुपर्दछ र बलबाट लुकाइएको हुनुपर्छ। त्यसपछि फूड फिडमा अर्ध-समाप्त उत्पादन लपेटो र रातभर ठुलोमा पठाउनुहोस्। यदि सम्भव छ भने, यो सम्भव छ र लामो अवधिको लागि। चूंकि, कुनै पनि कुरा नयाँ वर्ष जिंजरब्रेड नुस्खा कसरी घरमा छ, कुनै राम्रो तरिकाले ठुलो आटा लोचदार र अनुहार हुनेछ। तयार-पकाउने खाना। यसलाई 10 मिमीको मोटाईमा रोल गर्नुहोस्।
नयाँ वर्ष जिङ्गब्रेडको लागि नुहाउनुहोस् "गिलास"
यस्तो उत्पादनहरू उपहारका लागि उत्कृष्ट विकल्प हो। ब्लिज्जको साथ प्रस्तावित नुस्खा नयाँ वर्ष जिङ्गब्रेडको लागि परिवर्तन र पूरै सकिन्छ। तिनीहरूको तयारीको लागी तपाईंलाई चकलेट वा शहद आटा (अण्डाको साथ वा बिना), एक चक्कु, फरक ढाँचा, सानो धैर्य, अधिक कल्पना र राम्रो ओवन चाहिन्छ।
तपाईं त्यस्ता उत्पादनहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ: क्रिसमसको रूखहरू, जुत्ताहरू र स्टेभहरू। तिनीहरू धेरै खुसी गर्छिन्।
र प्रस्तुतिको अर्को संस्करण वयस्क अतिथिहरूको लागि अधिक उपयुक्त छ।
एक मूल वरदान चकलेट र हनी उत्पादनको जिङ्गीर सेट हुन सक्छ, सुरुचिपूर्ण सजावट। तिनीहरूलाई सबै बनाउन गाह्रो छैन।
अन्तमा, हामी कसरी ठीक देखि शीशे को तैयार गर्न मा बास गर्नेछन्। यो धेरै सरल हुन सक्छ। तथापि, यो निश्चित नियम र मिलिस्टोनहरू पछ्याउन आवश्यक छ।
200 ग्राम पाउडर गरिएको सिर्नी सिफ्ट हुनुपर्छ। गुणस्तर ग्लेज प्राप्त गर्न, यो दुई या तीन पटक यो प्रक्रिया दोहोर्याउन सिफारिस गरिन्छ। अर्को, यसलाई प्रोटीनमा थप्नुहोस् र खपत फोम सम्म मिश्रणलाई हराउन सुरु गर्नुहोस्। धीरे - धीरे एक सानो चम्मच स्टार्च को छिराए र थोडा नींबू को रस मा डालें। यदि तपाईंलाई रंगीन चमक चाहिन्छ भने, त्यसपछि खाना खानुहोस्।
हामी यसलाई एक विशेष पाक सिरिंज संग लागू गर्दछौं। यस उद्देश्यका लागि, तपाईं तलको प्याकेज प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ग्लेजको साथ भर्नुहोस्, क्यान्सरहरू काट्नुहोस् र धीरे प्रेस गर्नुहोस्, ढाँचा लागू गर्नुहोस्।
सजावट पछि जिन्जरब्रेड यसलाई यसलाई ठुलो ठाउँमा राख्न र गिलास वा प्लास्टिक कन्टेनरमा धेरै दिनसम्म छोड्न सिफारिस गरिन्छ।
कसरी समाप्त उत्पादनहरू भण्डार गर्ने
नयाँ वर्ष जिन्जरब्रेडको लागि जुनसुकै नुस्खा, यो बेकिंगको अनोखा फाईदा यो हो कि उत्पादन केहि समय को लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा यो प्रक्रिया सही तरिकाले व्यवस्थित गर्न हो।
तपाईं एक विशेष कन्टेनरमा जिङ्गब्रेड भण्डारण गर्न सक्नुहुनेछ जब सम्म 14 दिनको तापमान तापमान लगभग 18 डिग्री छ, र सापेक्ष आर्द्रता 75 प्रतिशत छ। यस अवस्थामा उत्पादन हरेक दिन नरम हुनेछ।
PO Box र यसको लाभ
Asceticism: यो के हो? asceticism को सिद्धान्त
स्थापना, अपार्टमेंट को पर्खालहरु फुकाल्नु। बाथरूम र शौचालय बीच पर्खाल को निराकरण। हलवे मा छत निराकरण विभाजन
किरा र तरकारी marrows को रोगहरु
सोमाली बिल्ली: फोटो। सोमाली बिल्ली: प्रकृति समीक्षा